RBNIR - 27/08/2019 10:18
Lasa ady hevitra be amin'ny mpivavaka ihany koa ny andro nahafatesan'i Jesosy, misy ireo milaza hoe andro alarobia, misy miteny hoe andro zoma,
Misy mihitsy aza miteny hoe izahay dia mivavaka amin'ilay Jesosy maty alarobia sns.....
Inona no tena marina???
Ny baiboly dia manambara mazava ny tena andro nahafatesan'i Jesosy, eny fa na dia ny ora nahafatesany aza dia voalaza ao anaty baiboly mihitsy,
Araho tsara ireto vidéo ireto....
RBNIR - 27/08/2019 10:21
ny andro nahafatesan'i Jesosy tohiny....
rhaj0 - 28/08/2019 12:43
Tantarao (fanin-2) fohifohy indray hoe ry RBNIR hoe, fa naninona i Jesosy no lasa condamnE A mort t@ io l'an 33 io? HOE:
- fa dia inona loatra no nataon'i Jesosy,
- ka niampangana azy,
- dia ahoana ny fandehan'ny fitsarana,
- iza ny mpitsara, iza no mpiampanga, iza no mpiaro
- dia ahoana ny argument-ny andaniny roa, sy ny an'ny mpitsara
- dia inona no didim-pitsarana nivoaka
- dia ahoana hozy ny "vahoaka"
- Ttena ilay "tantara" tantaraina, hoe maty novonoina araka ny didim-pitsarana i Jesosy,
- fa tsy ilay "tsianjeriboka" hoe, "maty noho ny otaNAO Jesosy" foana no averimberina.
RBNIR - 28/08/2019 16:46
Izao no voasoratra momba ny fitsarana an'i Jesosy rhajo
« Ary rehefa nafatony Izy, dia nentiny ka natolony an'i Pilato governora. » (Matio 27:2)
« dia hoy Pilato taminy: Tsy renao va izany zavatra maro iampangany Anao izany? » (Matio 27:13)
« Koa nony tafangona teo ny olona, dia hoy Pilato taminy: Iza moa no tianareo halefako ho anareo? Barabasy, sa Jesosy, Izay atao hoe Kristy? » (Matio 27:17)
« Hoy Pilato taminy: Ka ahoana kosa ary no hataoko amin'i Jesosy, Izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra: Aoka hohomboana amin'ny hazo fijaliana Izy. » (Matio 27:22)
« Ary raha hitan'i Pilato, fa tsy nahaleo ditra aza izy, fa vao mainka nandroso ihany aza ny tabataba, dia naka rano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe: Afaka amin'ny ran'ity Lehilahy marina ity aho, fa asa anareo. » (Matio 27:24)
Araka io dia i pilato no mpitsara, nefa i pilato tsy nahita heloka hiampangana an'i Jesosy fa saingy tsy nahaleo ny ditran'ny vaohaka i pilato dia voatery niampanga an'i Jesosy ihany...
Ny vahoaka (Jiosy tsy nino an'i Jesosy ho irak'Andriamanitra) no niray tetika hamono an'i Jesosy...
Tato izany conspiration izany no niainga
« Ary tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona tao an-kianjan'ny tranon'ny mpisoronabe atao hoe Kaiafa. » (Matio 26:3)
« Ary niara-nihevitra izy hisambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka ka hamono Azy; » (Matio 26:4)
« kanefa hoy izy: Tsy amin'ny andro firavoravoana, fandrao hisy tabataba amin'ny olona. » (Matio 26:5)
fitaka no nataon'ireo lohan-dohan'ny mpisorona ireo fa tsy misy zavatra marina akory
Làlam-pamonjena ho an'ny olona iny làlana nizoran'i Jesosy tamin'ny fahafatesana iny
Inona avy no mahazava-dehibe ny nahafatesany????
1- « Izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika, mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra, sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany, sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. » (Titosy 2:14)
2- Hanehoana amin'ny olona fa tena misy marina tokoa ilay fiainana mandrakizay fa tsy hoe lainga akory (hampiorina tsara ny finoan'ny kristiana).
Tsy misy fisaorana rhajo! mbola vonona hatrany hanazava araka izay nampianarin'i Jesosy namana....
RBNIR - 28/08/2019 16:53
Fanazavana fanampiny : Titosy 2:14 ilay ràn'i Jesosy manana pouvoir manaisotra ny ota....
Izay no tsy vitan'ny ram-biby fahiny...
Ny ràm-biby dia ahazoana famelan-keloka (saingy mila averimberina satria miverimberina ny heloky ny olona) izay no mahatonga ilay fanatitra natao isan'andro..
Fa ny ran'i Jesosy kosa sady handraisana famelan-keloka avy amin'i Andriamanitra no mahavita manaisotra ny ota ao anaty ao....Izay no antony nahatonga ny ran'i Jesosy natolotra indray mandeha monja tsy mila averimberina isan'andro tahaka ny taloha.....